पार्टी दुई तिहाई नजिक हुँदाहुँदै पनि कांग्रेससँग हार-गुहार गर्नुपर्ने ! [अन्तर्वार्ता] - कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
पार्टी दुई तिहाई नजिक हुँदाहुँदै पनि कांग्रेससँग हार-गुहार गर्नुपर्ने ! [अन्तर्वार्ता]
बहुमत–अल्पमतमा गए त फुटतिर जान्छ
काठमाडौँ — नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीच धुव्रीकरण भइँरहदा हरिवोल गजुरेलसहितका केही नेता भेटघाटमा जुटेका छन् । उनीहरुले आइतबार प्रधानमन्त्री ओली र सोमबार कार्यकारी अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरे ।
कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटारतिर दौडिरहेका गजुरेलसहितका नेतासँग नेकपा विवाद समाधानको मध्यामार्गी विकल्प के छ र दुवै अध्यक्षले उनीहरुसँग के कुरा गरे ? यसै विषयमा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य गजुरेलसँग बबिता शर्माले गरेको कुराकानीः
तपाईंलगायतका केही नेताहरु कहिले बालुवाटार त कहिले खुमलटारतिर दौडिरहनुभएको, के मिसनमा हुनुहुन्छ ?
पार्टीलाई फुटबाट बचाउनु पर्छ, सरकार र पार्टीको काम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो । अहिले फुट भयो भने राष्ट्रलाई नै दुर्घटनातिर लैजान्छ । जनतामा ठूलो निराशा पैदा हुन्छ । जेजति परिवर्तन भएका छन्, त्यसमाथि नै प्रश्न खडा हुनसक्छ । परिवर्तन विरोधी, कम्युनिष्ट विरोधीलाई खुशीको हुन्छ । तर, राष्ट्र र जनताका पक्षमा उभिनेहरुका लागि दुखदायी हो । जनताको लागि के–के गर्दा पार्टी फुटबाट जोगिन सक्छ, त्यहीँ–त्यहीँ गरिराखेका छौं । दौडधुप पनि यही सिलसिलामा भएका छन् ।
तपाईंहरुले क्रमशः दुवै अध्यक्षलाई भेट्नुभयो, के कुरा राख्नुभयो ?
हामीले दुवैजनासँग प्रष्टसँग कुरा राखेका छौं । अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेट्दा प्रधानमन्त्री ओलीजीको कुरा गर्छौं, तपाईंले किन यसो गरेको भनेर भन्छौं । उता प्रधानमन्त्रीसँग तपाईंले किन यसो गरेको भनेर प्रचण्डलाई भन्छौं । हामीले एकतिर गएर एकजनाको प्रशंसा गर्ने होइन कि दुवैतिर एकअर्कोको वकालत गर्ने काम गरिराखेका छौं । त्यसरीमात्रै एकता हुन्छ भन्ने छ हाम्रो बुझाई । एकातिर मात्रै गएपछि एकताको प्रयासको अर्थ नै भएन नि ! हामीले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीसँग र अध्यक्ष प्रचण्डसँग प्रष्टरुपमा विषयवस्तु राखेका छौं ।
हामीले अहिले स्थीरताको पक्षमा पनि जनमत हो भनेका छौं । वामपन्थीले मत दिएर पनि हामी दुई तिहाईको नजिक पुगेका हौं, यो स्थीरताको मत हो, त्यसको कदर गर्नुपर्‍यो । प्रधानमन्त्रीले सरकारको कामलाई जति सकिन्छ प्रभावकारी बनाउने र पाँच वर्ष सरकार टिकाउनु पर्‍यो । के–के गर्दा पाँच बर्ष सरकार टिक्छ, त्यहीँ–त्यहीँ गर्नुस्, बरु हामीलाई केही चाहिएन उहाँहरु दुवै जनालाई भनेका छौँ ।
प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतले चाहिँ महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई लैजाने काम तपाईंको हो भनेका छौं । यद्यपि कार्यकारी अध्यक्ष कागजमा भनिए पनि व्यवहारमा उहाँलाई भूमिका प्राप्त भएको छैन । तर, पनि तपाईंको दायित्व महाधिवेशनसम्म पार्टीलाई पुर्‍याउने हो भनेर प्रस्टसँग राखेका छौं ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षको भनाई के थियो ?
प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । म पनि त्यही चाहन्छु भन्नुभएको छ । स्थीरताको पक्षमा जनमत हो, त्यसकारण यो सरकारलाई टिकाउन र प्रभावकारी काम गर्छु भन्नु भएको छ । उहाँको भनाईमा ती काम भइराखेका छन् । तर गरेका कामको पनि कसैबाट स्वामित्व भएन, अरुले स्वामित्व नलिँदा समस्या भयो भन्ने उहाँको कुरा छ । म अझै पनि राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने मलाई विश्वास छ, तर वातावरण मिलेको छैन भन्ने उहाँको भनाई छ ।
कार्यकारी अध्यक्षले चाहिँ के भन्नुभयो ?
कार्यकारी दिएर के गर्ने व्यवहारत भूमिका निभाउन पाइराखेको छैन, प्रधानमन्त्रीबाट मलाई सहयोग भएन भन्ने छ उहाँको कुरा । एकातिर प्रधानमन्त्रीले अध्यक्ष प्रचण्डबाट मलाई राम्रो सहयोग भएन, राम्रा कामको पनि अरु साथीहरुले अपनत्व लिनु भएन, राम्रा कामको पनि विरोध मात्रै गरेपछि जनताले काम पनि नदेख्ने भए भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । अर्कोतिर कार्यकारी भूमिका पाइनँ भन्ने प्रचण्डको गुनासो छ । दुवैजनाको गुनासामा अलि–अलि सच्चाई पनि छन् ।
त्यसोभए खास समस्या कहाँ रहेछ त ?
समग्र आन्दोलनकै समस्या छ । उहाँहरुमा पनि समस्या छ । हामीमा पनि समस्या छ । हामीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्‍यौं भन्ने कुरा पनि आउँछ । हामीमै पनि एकथरी साथीहरु छन्, जसले प्रचण्डकँहा पुगेर प्रधानमन्त्रीको मात्रै बिग्रेको छ साख, तपाईंले एकदम राम्रो गर्नुभएको छ भन्छौं । अर्कोथरी साथीहरु छन्, जसले प्रधानमन्त्रीकँहा गएर तपार्इंको एकदम राम्रो छ, प्रचण्डले बिगार्नुभएको छ भन्छन् । पार्टीमा दुई अध्यक्षबीचमा यसरी खेल्ने अवसरवादी मान्छेहरु छन् । त्यस्ता मान्छेको प्रभावमा उहाँहरु पर्नु भएको छ ।
विवाद समाधानबारे उहाँहरुसँग अडानमात्रै छन् कि विकल्प पनि ?
त्यसरी विस्तृत कुरा त भएन । अहिले पार्टी फुटतिर गइराखेको अवस्थामा धेरै कुरा गरेर पनि अर्थ रहेन । पार्टीलाई फुटबाट बचाउन एक–अर्काका काममा हस्तक्षेप गर्नु भएन भन्ने हाम्रो कुरा हो । तर, उहाँहरुका अडान र चिन्तन त छन् । त्यो महाधिवेशनको दौरानमा छलफल गर्ने हो । त्यहीबाट टुंगो लाग्ने हो । पार्टीमा विमति हुन्छन्, त्यो राम्रै कुरा हो तर विमतिको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रमुख कुरा हो ।
दुवै अध्यक्षलाई भेटेपछि तपाईंको निष्कर्ष के छ, विवाद समाधानतिर जाँदैछ कि थप जटिलतातिर ?
फुटबाट बच्ने आशा गरेका छौं । त्यो दिशातिर दुवै अध्यक्षको कुरा थियो । यद्यपि उहाँहरु त फुटको डिलडिलमा पुगिसक्नु भएको हो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले फुटलाई रोक्नुपर्छ भन्नेतिर उहाँहरुले चिन्तन गर्न थालेको अनुभूति गरेको छु ।
यसको मतलव कार्यान्वय हुन नसकेको भदौ २६ को निर्णय कार्यान्वय गरेर भए पनि पार्टीलाई फुटबाट जोगाउनु पर्छ भन्ने हो ?
त्यतिले मात्रै पुग्दैन । त्यो लागू भइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यसमा समस्या आयो । अब अलि नयाँ ठाउँबाट बहस उठाउनु पर्छ किनभने दुई अध्यक्षको प्रस्ताव भनम या एक अर्काप्रतिको आक्रोश–आवेग पनि व्यक्त भएको छ । प्रधानमन्त्रीको पनि आउला प्रस्ताव । ती दुवै प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि हामीले आफ्ना कुरा राख्ने हो । पहिलाकै ठाउँमा बसेर हिजोकै कुरा लागू गरौं भनेर केही अर्थ रहेन, चिज अगाडि बढिसक्यो ।
तर, प्रधानमन्त्रीले त कांग्रेस सभापतिसँग भेटेर सत्ता साझेदारीको कुरा गरेको समाचार आएको छ, यसले त विवाद विभाजनतिर गए जस्तो पो देखाउँछ त ?
काग्रेस सभापतिसँग भेटेको कुरा राजनीतिक नियुक्ति, संवैधानिक नियुक्तिका विषयमा पनि होला । अर्कोतिर अहिले जुन संकट आइराखेको छ त्यो विषयमा पनि होला । संकटतिर गएपछि मान्छेले सहारा जताततै खोज्न जान्छ, यो सबैले गर्छन् । एउटाले गर्‍यो अर्कोले गरेन भन्ने हुँदैन । आफू सुरक्षित हुन, बच्न पहल हुन्छ । त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर त्यो स्थिति पैदा हुने ठाउँमा किन पार्टी पुग्यो भन्ने कुराको हामीले समीक्षा गर्नुपर्‍यो नि त ! पार्टी दुई तिहाई नजिक हुँदाहुँदै पनि कांग्रेससँग गएर हार गुहार गर्नुपर्ने ! समाजवादीसँग गएर हारगुहार गर्नुपर्ने स्थिति किन पैदा भयो त ? त्यसको समीक्षा गर्नुपर्‍यो दुवै अध्यक्षले । यो अवस्था सिर्जना गर्ने उहाँहरु नै हो । उहाँहरुले आफ्नो समीक्षा गर्नुपर्‍यो ।
दाहाल–नेपालले प्रधानमन्त्रीले त्याग गर्नेबेला आयो भनेका छन्, प्रधानमन्त्री राजीनामाको कुरै सुन्न नचाहने । स्थिति त जटिलै छैन र ?
अहिले शिष्ट भाषा छ । पहिला त दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने थियो । अहिले त त्याग मात्रै भन्ने छ । त्यसलाई किन नकारात्मक रुपमा लिने ? त्याग त गर्नुपर्‍यो नि Û सबै नेताहरुले त्याग नगरे कसरी हुन्छ र ! कसैलाई प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने, कसैलाई मन्त्री हुनै पर्ने भन्ने भएपछि कसरी कम्युनिष्ट पार्टी अगाडि बढ्छ ? यहाँ त त्यागको भावना नभएर न बिग्रेको हो । अवसरको मात्रै खोजी गर्ने, त्याग गर्न कोही नचाहने भएर बिग्रेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि त्याग गर्नुपर्छ भन्नेमा हो तपाईं ?
त्याग नगरिकन त हुँदैन । त्याग कसले कति गर्ने भन्ने कुरा हो । एउटाले अर्कोको मनोविज्ञान, मनोभावना नबुझिकन एकता नै हुँदैन । मुख्य कुरा नेताहरु आफूतिर फर्के भने एकता हुन्छ, फर्केनन् भने हुँदैन । मेरो कारणले कहाँ–कहाँ समस्या भयो भनेर उहाँहरु आफैंतिर फर्कने हो । तर, त्यस्तो म पाँउदिनँ । यो दुखको कुरा हो । एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई मात्र औंला ठड्याउने र आफूतिर नफर्किने समस्या भयो । जनताको धारणा कहाँ छ, कार्यकर्ताको धारणा कहाँ छ भन्ने कुरा त उहाँहरुले हेर्दिनु पर्‍यो । त्यो कुरा उहाँहरुले नबुझेपछि अनि आसोपासे, चाकरीबाज जो आउँछन् उनीहरुका कुरा सुनेर दंग परेपछि स्थिति कहाँबाट राम्रो हुन्छ त ?
अहिले कमजोरी कसको त ?
मुख्य त पहिला अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नुभयो । त्यसको प्रतिवाद गरियो । यतापट्टी प्रचण्ड–माधव कमरेडको तर्फबाट केपी ओलीलाई दुवै पदबाट हटाउने कुरा आयो । त्यो बेला हामीले राष्ट्रियताको यत्रो मुद्दा बढिराखेको बेला दुई पदबाट हटाउनु ठिक हुन्न भनेर त्यसको पनि प्रतिवाद गर्‍यौं । अहिले पछिल्लो समय स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयमा प्रधानमन्त्रीको जुन तत्परता हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन । त्यसले राम्रो सन्देश गएको छैन । नियुक्ति गर्दा पनि एकतर्फी गर्ने काम भयो । त्यसमध्ये पनि प्रचण्डको उग्र विरोध गर्ने मान्छेहरुलाई प्राथमिकता दिने काम भएको छ, त्यसले एकताको भाव पैदा गरेन । हामीले त्यसैकारण प्रधानमन्त्रीलाई यसलाई तपार्इंले ‘करेक्सन’ गर्नुपछ, पहल तपाईंले नै लिनुपर्छ, पछिल्लो समय प्रचण्डको कमजोरी कम छ, बाहिर मान्छेहरु पनि त्यही भनिराखेका छन् भनिरहेका छौं । हिजो ओलीजीप्रति अलिकति सहानुभूति थियो मान्छेहरुमा, अहिले सहानुभूति प्रचण्डप्रति छ । जसरी प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दा, मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा एकतर्फी गर्नुभयो त्यो मान्छेहरुले राम्रो मानिराखेका छैनन् ।
नेकपामा पहिलोपटक दुई प्रस्ताव पार्टी कमिटीमा प्रवेश गर्दैछन्, त्यो पनि संगीन आरोप–प्रत्यारोपका यसको व्यवस्थापनको विधि के हुन्छ त ?
हा हा हा...कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा नकारात्मक पक्ष पनि छ । कहाँ–कहाँ पुग्छन् भन्ने इतिहास छ । लिनप्याओले माओलाई मार्न षड्यन्त्र गर्ने, स्टालिनको बफादार भएको मान्छेले उनकैविरुद्ध विषवमन गरेको इतिहास छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनका नकारात्मक पक्ष त भोग्दै आइरहेका छौं । अहिले त के भएको छ र ? उहाँहरुले आफ्ना–आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ । आरोप–प्रत्यारोप पनि छ । आरोप–प्रत्यारोप र बहसमा मात्रै गइदिए पनि राम्रो हो । बहसमा जानु भएन उहाँहरु खाली आरोप–प्रत्यारोपमा मात्रै केन्द्रीत हुनुभयो । यसले दुर्घटनातिरै लान्छ । तर, छलफल बहस गर्‍यो भने जनता, कार्यकर्ताले पनि बुझ्न पाउँछ । लागेका आक्षेप, आरोपहरुलाई स्पष्ट गर्ने अवसर पनि हो ।
बहुमत अल्पमतबाट विवाद टुंगाउनेतिर गयो भने यसको नतिजा के हुन्छ ?
फुटतिर जान्छ, अरु केही हुँदैन । सहमतिबाटै महाधिवेशनमा जाने हाम्रो मूल भावना हो । दुई अध्यक्ष व्यवस्था गरेको त्यसैलाई हो । एकता गर्दा पूर्वएमालेको ६० प्रतिशत थियो भने पूर्वमाओवादीको ४० प्रतिशत हो । एकछिनलाई मानौं, बहुमत अल्पमत गर्ने हो भने र पूवएमाले एक ठाउँ उभिए भने के हुन्थ्यो ? ६० ले ४० लाई कारबाही गर्दिहाल्छ, त्यो त हामीले बुझ्नु पर्‍यो नि ! त्यसकारण बहुमत/अल्पमतबाट समस्या समाधान हुँदैन ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ १८:२२
काठमाडौँ — कोभिड—१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले अन्तर्राष्ट्रिय उडान संख्या बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सीसीएमसी निर्देशक समितिको मंगलबारको बैठकले अहिले उडानका लागि स्वीकृति पाएका मुलुकबाहेक अन्य मुलुकमा पनि कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था मूल्यांकन गरी आवश्यकताअनुसार उडान अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । संक्रमणको जोखिम मूल्यांकन गरी अन्य मुकुलमा पनि आवश्यकताअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नियमित उडानको अनुमति दिन निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले बताए । उनले भने, ‘नियमित उडान स्वीकृति भएका देशका अलावा संक्रमणको जोखिम मूल्यांकन गरी अन्य मुलुकमा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आवश्यकताअनुसार क्रमशः नियमित उडान अनुमति दिँदै जाने निर्णय भएको छ ।’
विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा एक/दुई जनामा संक्रमण देखिनेवित्तिकै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यस्तो नगर्न पनि सीसीएमसीले निर्देशन दिएको छ । संक्रमित व्यक्तिहरुलाई आइसोलेसनमा राखेर सेवा नियमित गर्न निर्देशन दिइएको उनले बताए । संक्रमण उच्च रहेका र कम हुँदै गएका स्थानमा के कस्ता सेवा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ ।
पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उपत्यका मेयर फोरमले कडा निषेधाज्ञा गर्न सिफारिस गरेको थियो । यद्यपि सीसीएमसीले तत्काल निषेधाज्ञा गर्ने विषयमा भने कुनै निर्णय गरेको छैन । संक्रमणको उच्च रहेको सीमित स्थानलाई सिल गरी सेवा सञ्चालनका सम्बन्धमा केही निर्णय गर्न सकिने गरी छलफल भएको सचिव गुरागाईंले बताए ।
उपत्यकामा रहेको एकीकृत एम्बुलेन्स सेवाको पर्किङ समस्या रहेकाले विभिन्न स्थानीय तहमा पार्किङका लागि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
प्रकाशित : मंसिर ९, २०७७ १८:१५
‘पीडितको उद्धार पहिलो प्राथमिकता’